U-Ennis Cabin - Imindeni, abadobi nezinja zamukelekile
Madison County, Montana, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Kelcey
Ibekwe ngaphansi kwe-Madison Mountain Range, unamathuba angapheli okushushuluza, ukuntanta kwemifula, ukuzingela kanye nezindlela zokuhamba izintaba kunoma iyiphi indlela. I-Ennis iyipharadesi lokudoba impukane!
Itholakala imizuzu eyi-12 ukusuka edolobheni lase-Ennis ukuze uthole iziqondiso zendawo, ukuyothenga kanye nezindawo zokudlela. Ikhabethe linekhishi eligcwele, igumbi elondolo, ukugijima kwezinja, isitofu esivuthayo sezinkuni, i-patio, i-grill kanye nemibono emihle!
I-Varney Bridge: imizuzu eyi-15
I-Yellowstone National Park: 1 ihora
I-Virginia City: 30 imiz
Norris Hot Springs: 30 min
I-Bozeman: 1 ihora
Ikhabhinethi izimele yodwa ekhaya etholakala kumahektha angama-20 eduze nendawo esihlala kuyo manje. Inja inobungani nediphozithi eyengeziwe. Kulala abantu abangafika kwabayi-6 abanamagumbi amabili okulala kanye nombhede osofa wokudonsa egumbini lokuhlala.
5.0 ·31 okushiwo abanye
5.0 · 31 okushiwo abanye
Siyatholakala 24/7 njengoba kudingeka.
UKelcey Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Madison County namaphethelo